Buyintoni ubugcisa beengcinga: inkcazo, iimpawu kunye namagcisa obu buchule | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Buyintoni ubugcisa beengcinga
Ubugcisa beConcept, i-Concept Art okanye i-Concept Art yinto enye. Banokubizwa ngokuba luphuhliso olubonakalayo kwaye luyachuma. Ukuphuhliswa kweeprojekthi, ngakumbi ezo zinxulumene nemidlalo yevidiyo, uthotho okanye iifilimu zoopopayi zisetyenziselwa ukuba nobude bokuqala malunga "nendlela ebukeka ngayo kunye nendlela evakalelwa ngayo" ngento etsalwayo.
Kodwa, Buyintoni ubugcisa beengcinga? Zeziphi iingenelo esinazo? Wenza njani? Ukuba uyazibuza kwaye ufuna ukufumana impendulo kuyo yonke le mibuzo, kunye neminye, siya kukunceda ucacise izimvo zakho.
1 Buyintoni ubugcisa beengcinga
1.1 Umxholo wobugcisa kunye nomzekeliso
2 Yenziwa njani le nto yobugcisa
3 Ungaba njani yiNgcali yobuGcisa beConcept
3.1 Ulwazi lobugcisa
4 Umxholo wobugcisa
4.1 UIgnacio Bazán Lazcano
4.3 UPepo Salazar
4.4 UJuan Pablo Roldan
Ingqondo yobugcisa yinxalenye yobugcisa obubonwayo. Inokuchazwa njengoqeqesho oluxanduva lwayo sombulula iingxaki ezibalisayo nezobuhle. Kwaye oku kwenza ukuba kusetyenziswe izinto ezibonakalayo. Ngamanye amagama, kukubonakaliswa okubonakalayo kwezimvo ngokweempawu, useto, izinto, njl. umntu okanye iqela ebelinalo.
Luluqikelelo lokuqala lokuba zonke ezi zinto zijongeka njani kwaye emva koko "uzinike" ngobomi ngokusebenzisa izinto ezibonakalayo.
Umxholo wobugcisa kunye nomzekeliso
Kuya kufuneka ukhumbule ukuba ubugcisa bembono kunye nomzekeliso azifani, nangona ezangaphambili zinokubandakanya le yokugqibela. Ngokubanzi, umxholo wobugcisa ngumzekeliso, nokuba kungobalinganiswa, useto, izixhobo ... Kodwa inomsebenzi owahlukileyo kunomzekeliso. Ngelixa oku kujolise ekubaliseni ibali, kunye nabalinganiswa balo, ibali lalo, iimeko zalo; kwimeko yobugcisa bokuqiqa ngumzobo nje wendlela izinto ezinokuthi zihambe ngayo, ayikho enye into. Kodwa ayinakusetyenziswa ngokwayo; Kuya kufuneka usebenze kuyo ukuze uyinikeze loo "nto."
Ngamanye amagama, luqikelelo lokuqala lokuba isiphumo sokugqibela siya kuba yintoni, indlela yokwenza oko kubonisiweyo kubeyinyani. Endaweni yoko, umzekeliso esiwuthethayo ngesiphumo esipheleleyo.
Yenziwa njani le nto yobugcisa
Ukuba ubunokuzibuza kwiminyaka embalwa eyadlulayo, besiya kukuxelela ukuba, ukwenza ubugcisa beengcinga, yonke into oyifunayo ibiyipensile, iphepha kunye nomfanekiso ngqondweni omkhulu. Kodwa ngoku, ngobuchwephesha obutsha, inyani kukuba iinkqubo zokuhlela imifanekiso zibaluleke kakhulu ukwenza olu hlobo lobugcisa.
Izinto ezinje nge3D, ukwakhiwa, ukuhanjiswa, iZbrush kunye nezinye iikhonsepthi Isenokungavakali njengeTshayina kuwe, kodwa iya kuba "sisonka semihla ngemihla" somsebenzi wakho.
Ukongeza, kuya kufuneka uyithathele ingqalelo into yokuba, ngaphakathi komxholo wobugcisa, kukho izinto ezimbini eziphambili (eneneni zingaphezulu, kodwa zimbini zezona zaziwayo):
Uyilo lwemeko. Ezi ziya kuba ziindawo apho iimeko ezibalulekileyo zomsebenzi ziyakwenzeka khona. Ke ngoko, kufuneka iinkcukacha kwiinkcukacha ezincinci ukuze ukwazi ukubona ukuba yonke indawo idityaniswe njani kwaye idlulisela ziphi iimvakalelo. Ngesi sizathu, ubuchwephesha obunjengombono, imibala, izibane kunye nezithunzi zibaluleke kakhulu, kuba ngazo izinto okanye inxenye yento ethi «umhombiso» ivelele.
Uyilo lomntu. Ukuzenza, kuya kufuneka uziqonde. Ayisiyiyo kuphela imeko yomzimba wabalinganiswa ebalulekileyo, kodwa nengaphakathi labo ukuze babonakalise ngaphandle ezo mpawu zichaza abalinganiswa. Yintoni injongo? Ukuba bavelise uvelwano. Ukuze ukwazi ukuyila ngokufanelekileyo, kubaluleke kakhulu ukuba wazi ubunjani baba balinganiswa, kunye nembonakalo yobuso babo. Kwaye asibhekiseli ebantwini kuphela, kodwa nakwizilwanyana nakwizityalo.
Ingqokelela yamagcisa ngokwawo ayacebisa ukuba umyili unezakhono ezithile zokubalisa. Unokuba ngumntu ozobe kakuhle, kodwa ukuba awuyiniki imizobo yakho ibali, indlela yokuqonda le mizekeliso uyibonisayo, okanye umxholo ngokwawo, baphulukana nobomi kwaye bahlala kuphela yimizekelo.
Endaweni yoko, ubugcisa beengcinga budala isiseko sebali.
Ungaba njani yiNgcali yobuGcisa beConcept
Ukuba uyilo lomzobo, okanye uyakuthanda ukuzoba, kunokwenzeka ukuba ubugcisa bembono yingcinga ebamba umdla wakho, ngakumbi kuba ikuvulela iingcango ezininzi. Nangona kunjalo, ukuze uphumelele, kufuneka ube nezinto ezithile phantsi kwebhanti lakho ukuze ume ngaphandle kwabanye. Zezi:
Kuyimfuneko ukuba uyazi yonke into enokwenzeka (nangaphezulu) malunga nemifanekiso, imifanekiso, ubuchule, unyango, iifomathi ... Ngamafutshane, unokuba nesiseko esiqinileyo sobugcisa.
Ewe, gcina engqondweni ukuba, Njengoko siqhubela phambili, kukho iindlela ezintsha, iindlela ezintsha zokuzoba ekuya kufuneka ufunde. Ngaphandle koko, uyakugcina uphelelwe lixesha kwaye ezintsha ziya kukufumana.
Ke ngoko, kuya kufuneka ukuba uziqonde zonke ezo ngcamango, nokuba zisebenza ngendlela eqhelekileyo okanye ugqwesa ngo-1-2, kodwa ube ngowona uphambili kuwo.
Ukuba unalo lonke olo lwazi ayithethi loo nto ubuchule bokuyila yinto eza kwenza ukuba ikhondo lomsebenzi wakho libalasele. Kwaye iyakwenza njalo kuba uyilo lwakho luya kuba lukhethekileyo, kuba ubabonelela ngento abangenako abanye ukuyenza. Ukuba ungaziguqula izimvo zakho zibe zezobugcisa obunokwenyani nobakhobokisayo ongenakujonga kude naloo mfanekiso, unokuphumelela.
Asiyi kukukhohlisa. Ukuze uphumelele kufuneka uzazise kwaye oko kubandakanya umsebenzi omninzi phambili kunkqonkqozwa kwiminyango yasekunene. Unxibelelwano lwentlalo lunceda, kakhulu. Kungenxa yoko le nto sichitha ixesha usebenza kubo, ungapheleli kuyilo kuphela, kodwa ukwazisa unxibelelwano neenkampani ezinokuba nomdla.
Ngokuzazisa ngokwakho ukuba ubona umsebenzi owenzayo, okanye ubonakalisa uyilo lwakho kwiinkampani, iibhlog, njl. Kwakhona ukwenza into oziva ngathi ithintelwe, okanye ocinga ukuba ayizukulunga ngokufanelekileyo. Ukuba ngumoni, ngandlel 'ithile, kunokunceda ukuzenzela igama, ukuba uhlonipha imida engenakuwela, ewe.
Ngaphambi kokuba ushiye isifundo, kulunge ukuba udibane namanye amagcisa ayigugu eliyinyani kubugcisa beengcinga. Bayayazi indlela yokwenza umsebenzi wabo, abanye baya kude. Apha sishiya amagama abo.
UIgnacio Bazán Lazcano
Wazalelwa eBuenos Aires, eArgentina, kwaye usebenza yedwa esebenza ngobugcisa beengcinga, kodwa nakumzekeliso. Umsebenzi wakhe ubumhle kangangokuba ebewusebenzela iinkampani ezinje ngeGameloft, iTimegate, iSabarasa ...
Uyilo onokuthi uxelele ukuba uqhele ngakumbi kulo, kwaye ukonwabela ngakumbi, zezo zinesitampu, i-cyberpunk okanye umxholo we-post-apocalyptic.
Uzalelwe eMurcia, ngoku uhlala eMadrid kwaye ungomnye wabameli bezobugcisa. Inyaniso, ngo-2015 wafumana iBhaso leVelázquez loBugcisa bePlastiki.
Wazalelwa eVitoria-Gasteiz, e-valava, nangona ngoku ahlala eFrance. Ungumculi, umzobi, njl. kwaye kwimeko yobugcisa bobugcisa, yenye yezona zibalaseleyo eSpain.
UJuan Pablo Roldan
Kule meko siya eColombia, apho uJuan Pablo Roldán egxile kwimibono yamaphupha kunye nexesha eliphakathi. I-embroider engafaniyo nemifanekiso yeedragons kunye nesenzo, Kwaye amaxesha amaninzi, ngokwabo loo mizobo igcwele amandla kwaye unokubona ukungavisisani kwindawo yabo.
Malunga nomsebenzi wakhe, sinokuqaqambisa iMidlalo ye-Bluepoint, i-Justice League, iiHalo Wars, iDestiny 2, ...
Zininzi kakhulu ezinye iingcali. Sitshele ukuba ufuna ukucebisa enye. Ngaba kuye kwacaca ngakumbi ukuba yeyiphi ingcinga yobugcisa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Buyintoni ubugcisa beengcinga
Izixhobo ezisi-7 zokwenza iimephu ezinengqiqo kwi-intanethi nakwiselfowuni yakho
Ezona 6 zezona mockups zilungileyo